१ प्रतिशत ब्याज दरमा यसरी कि`न्न सकिन्छ होन्डा एक्स`आर १९०एल !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Auto News/१ प्रतिशत ब्याज दरमा यसरी कि`न्न सकिन्छ होन्डा एक्स`आर १९०एल !!
युवाहरुले निकै नै रुचाएको हो`न्डाको बाइक एक्स आर १९०एल किन्न`का लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा सुवि`धा उपलब्ध छ । नेपालका लागि होन्डाको आधि`कारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले एक्सआर १९०एल का लागि विशेष अफर उपलब्ध गराइरहेको छ ।
यसका लागि शुरुमा ६० प्रति`शत डाउन पेमेन्टको रुपमा ३ लाख ५६ हजार ९४० रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । बाँकी रकम एक वर्ष भित्र महिनाको करिव १९ हजार ९ सय रुपै`याँको दरले बुझाउनु पर्छ । शुरुमा बाइक किन्दा पहिलो महिनाको इएमआई अर्थात किस्ताको साथै रजिष्ट्रेसन शुल्क १ हजार र इन्स्योरेन्स शुल्क १२ हजार ५ सय रुपैयाँ समेत बुझा`उनु पर्छ । यसको आधारमा बाइक किन्नका लागि शुरुमा ३ लाख ७० हजार ४४० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले जनाएको छ ।
होन्डा एक्सआर १९०एल युवाहरुले निकै नै रुचाएको बाइक हो । हाल यो बाइकका लागि धेरैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । २५० सीसीको एक्सआर रुचाउने युवाहरुले सस्तो मूल्यमा पाउने भएकाले पनि यो बाइक धेरैको रोजाइमा परेको छ । होन्डाले लकडाउनको समयका लागि ल्याएको विभिन्न योजना मध्ये तेस्रो योजना अन्तर्गत एक प्रतिशत ब्याजमा होन्डाका मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्न सकिन्छ ।
यो योजनमा ग्राहकले १ प्रतिशतमा ब्याज दरमा ऋ`ण प्राप्त गर्छन् र यसको अवधि एक वर्ष हुन्छ । यसको अर्थ बाइक वा स्कुटर किन्नका लागि होन्डाले आफै ऋण उपलब्ध गराउँछ र सो ऋण एक वर्ष भित्र तिर्न सकिन्छ । यस योजनामा मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्न चाहने ग्राहकले ६० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ ।